विगतमा झोलामा राखियो भनिएको एनआरएन अमेरिका आज हार्डड्राइभमा कब्जा | khaltinews.com
विगतमा झोलामा राखियो भनिएको एनआरएन अमेरिका आज हार्डड्राइभमा कब्जा
म लामो समयदेखि टेक्ससको ड्यालसमा रहेर व्यवसाय तथा समाजसेवमा सक्रिय रहँदै आएको छु । अमेरिकामा आएदेखि नै ड्यालसमा बस्दै आएको हुनाले पनि म यहाँका हरेक सामाजिक कार्यमा सक्दो रूपमा सक्रिय रहँदै आएको पनि छु। ड्यालसको एभरेष्ट लायन्स क्लबको अध्यक्ष भएर काम गरिसकेपछि धेरै साथीहरूले मलाई नेपाली समाज टेक्सासको अध्यक्षको रूपमा काम गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो । मेरो समाजसेवाको सकृयता देखेर पनि समाजका धेरै अगुवाहरु, सहकर्मीहरुले मलाई अध्यक्षका रूपमा काम गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
तत्कालीन समयमा पनि नेपाली समाज टेक्ससको अध्यक्षका लागि साथीहरू नेपालको राजनीतिक दलको प्रभावमा परि दुई प्यानल बनाएरै चुनावमा होमिए । तर म भने विदेशीमा नेपाली भन्ने पहिचानको आवश्यकता देखी नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दै प्यानल बिनानै अध्यक्ष उठेको भए पनि मलाई विश्वास र माया दिएर समाजकै अगुवाहरु, सदस्यहरूले विजयी बनाउनुभएको थियो ।
मलाई लाग्छ– नेपालको राजनीतिक दलको छायाँ बनेर, भातृसंस्थाको रूपमा रहेर प्रवासमा काम गर्नुको कुनै औचित्य छैन। म पनि नेपालमा छँदा कुनै दलको आस्था बोकेको, विद्यार्थी राजनीति गरेको व्यक्ति हुँ । तर मैले प्रवासमा आएदेखि त्यसलाई चटक्कै छाडे। किनभने नेपालको राजनीतिको छायाँलाई यहाँ ल्याउँदा हामी बलियो होइन, हामी कमजोर हुन्छौँ भन्ने मेरो धारणा हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहिरहनेछ । हामीलाई एउटा
ठाउँमा आउन नदिने पनि राजनीति घुसपैठनै हो ।
मैले नेपाली समाज टेक्सासको अध्यक्ष र लायन्स क्लबको अध्यक्षको रूपमा रहँदा कति स्वच्छ र पदको मर्यादामा रहेर काम गरेको थिंए भन्ने कुरा त यहाँका सबै साथीहरूलाई राम्रोसँग जानकारी छ । धेरै साथीहरूले मेरो त्यही कामको कदर गर्दै अहिले पनि पटक पटक त्यो समयको स्मरण गर्नुहुन्छ ।
साथीहरूले ‘तपाईँको पालामा त समाजमा सामाजिक भावना थियो, तर अहिले त समाज भित्र राजनीति पस्यो’ भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहनुहुन्छ । नेपाली समाजमा रहँदा होस् या अन्य समयमा पनि अमेरिकाको नेपाली समाजमा भएका हरेक कार्यमा चासो नदिने त कुरा नै भएन । त्यसैले मैले पनि एनआरएन अमेरिका जब केही व्यक्तिको सञ्जालबाट बाहिर आयो त्यस समयदेखि नै सदस्यता बिस्तार लगायतका कार्यमा सक्रिय भएर लागेको थिएँ । खग्रेन्द्र क्षेत्रीज्यू अध्यक्ष निर्वाचित हुने समयमा पनि म लगायतका केही साथीहरूको सकृयतामा ड्यालसमा थोरै भए पनि सदस्यता बिस्तार गर्न सकेका थियौँ ।
खग्रेन्द्र जीको कार्यकाल सकिन लाग्दा नयाँ नेतृत्व चयनको चर्चासँगै मलाई पनि एनआरएन अभियान अमेरिकामा अलि राम्रोसँग फैलाउन आवश्यक छ भन्ने लागेर यसको नेतृत्व तहमै बसेर काम गर्ने इच्छा जाग्यो । नेपाली समाजको नेतृत्व, लायन्स क्लकको नेतृत्व लिइसकेको र त्यहाँ मेरो कामलाई हेर्ने साथीहरूले एनआरएनका लागि मलाई प्रस्ताव गर्नुभयो ।
मेरो सामाजिक कार्यको योगदान बुझेका साथीहरू लगायतको सुझावमा म पनि सदस्यता बिस्तारमा लागेर नेतृत्वका लागि पनि उपाध्यक्ष पदमा पनि उम्मेदवारी दिएको थिएँ त्यतिखेर । मेरो अभियानमा धेरै साथीहरूको साथ मिल्यो र मैले ठुलो प्रतिष्प्रधा रहेको निर्वाचनमा उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएँ ।
म उपाध्यक्ष भए पछि कार्यसमितिमा पुगेर एनआरएन अमेरिकामा धेरै काम गर्न सकिन्छ जस्तो लागेको थियो । म शुरुका बैठक देखि नै समाजहित र एनआरएनलाई बलियो बनाउने खालका योजनाहरू पटक, पटक प्रस्तुत गरिरहन्थे । मैले पेस गरेका एजेण्डाहरु सबै लागुभएका भए आज एनआरएन अमेरिका अर्कै लेभलमा हुन्थ्यो जस्तो लाग्दछ ।
मैले हामी चुनावमुखी मात्र होइन यहाँ संस्थागत विकासका साथै च्याप्टर अनि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष लगायतका सबै पदहरुको जिम्मेवारी बाँडफाड र योजनाका कुरा पनि उठाएँ तर यो कार्यसमितिबाट पारित भएनन् । नेपाली डायस्पोरा र एनआरएन अभियानको हितमा चाहे जस्तो यो समितिबाटै सम्भव गर्न सकियन किनकि कार्यसमितिको निर्णायक तहमा म थिइन । आईसिसीको चुनावका बेला होस् या अरू धेरै कुरामा यो टिमले चाहे जस्तो सफलता दिलाउन सकेन।
धेरै साथीहरू भन्नुहुन्छ–‘अहिलेको नेतृत्व नै फेल हो त्यसैले तपाईहरु सबै फेल हुनुभयो ।’ मलाई यो कुरा सुन्दा अत्यन्तै दुख लाग्दछ । पत्रकार, समाजका अगुवा सबैले अलि गहिरीएर बुझ्नु पर्ने हुन्छ, समितिले काम गर्न सकेन भन्दैमा सबै जना फेलिएर हुन् भन्नु अलि कमजोर बुझाई हो की जस्तो लाग्दछ ।
मैले जे जति जिम्मेवारी र भूमिका कार्यसमितिबाट पाएको थिएँ, ती सबै अब्बल ढङ्गले सम्पन्न गरेर प्रमाणित गरेको छु । अत्यन्तै छोटो समयमा ड्यालसमा साधारणसभा गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । जस्लाई मैले भव्य र एतिहासीक सफल पारेर देखाएँ । सबैले भन्दछन् एनआरएनले यो लेभलको भव्य कार्यक्रम अमेरिकामा पहिलो पटक नै गरेको थियो ।
अहिले एनआरएन अमेरिकामा फेरि नयाँ चुनावको रौनकता छ। जता गयो त्यतैतिर सबैजनाको मुखमा चुनावकै कुरामात्र झुण्डिएको सुन्छु । यहाँ कसैले पनि संस्थागत विकासको कुरा गरेको मैले सुनेको छैन । हामी जसरी भए पनि चुनाव जित्ने मात्र लहडमा छौँ । चुनाव आउनु भन्दा ६ महिना पहिला देखि उम्मेदवारी घोषणा हुन लाग्छ अनि चुनावको मुखैमा आएर सदस्यता वितरण चल्छ ।
यो चुनाव केन्द्रित र अनियन्त्रित सदस्यता वितरण र चुनाव जित्ने खेलले हाम्रो एनआरएन अभियानाको भविष्य के होला त ? यसरी आफैले सदस्य बनाएर आफैलाई भोट हालेको नेतृत्वले सबैलाई समेट्न सक्ला त ? गम्भीर प्रश्न आज हाम्रो सामु छ । मैले धेरै ठाउँमा भन्दै आएको छु–हामी एनआरएनको नाममा समाज जोड्ने भन्दा पनि समाज भाड्ने कामममा पो लागेका छौँ ।
यसमा त्यो, उ भन्नुभन्दा पनि आफुले आफैँलाई छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । सदस्यता के का आधारमा बने ? कसरी बनाइयो भनेर स्वतन्त्र छानबिन समिति बन्न आवश्यक छ । चुनाव आउनुभन्दा तीन महिना पहिले सदस्यता रोकेर वास्तविक मतदाताले मात्र भोट हाल्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । हामी संसारको सबैभन्दा ठुलो सदस्यता सङ्ख्या भएको देश भन्छौं तर आइसीसीमा जाँदा आफैमा बाडिन्छौं, यसरी हामी कहाँ पुगिएला भनेर सोच्नु पर्ने बेला भएको छ ।
एनआरएन अमेरिकाले आईसीसीमा प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भन्दैछौँ हामी । तर अहिले यस निर्वाचनमा हेर्ने हो भने नेतृत्वमा आउन चाहने साथीहरू लगायत एनआरएनका अग्रज लिडरहरुले अमेरिकाको नेपाली समाजलाई मिलाएर बलियो बनाएर सहकार्यमा हिडाउनु पर्नेमा उहाँहरूले आइसीसीमा म कता पर्छु, कुन समुहमा पर्छु भन्ने पदको होडबाजीमा गुट उपगुटको सिर्जना गरी आफ्नो पदको रक्षाको लागि एनआरएन अमेरिकालाई नै बिभाजित गर्न लागेको देखिन्छ । त्यसैले यति बेला चुनवाको कुराले सबै जना चुनावको हार जित पछाडि मात्र दौडेको देख्छु । तर म आफै एउटा अध्यक्षको उम्मेदवार हुँदा पनि संस्थाले जित्ला या हार्ला र संस्थाको भविष्यको बारेमा सोचेर गम्भीर भएको छु ।
हामी लामो समयसम्म एनआरएन अमेरिकालाई झोलामा थियो । केही व्यक्तिले मात्र कब्जा गरेर झोलाबाट चलाए भनेर बहस चलायौं र बाहिर पनि आयो । तर अहिले झन् केही व्यक्तिले कम्प्युटरको हार्डडाईभमा संस्थालाई कब्जा गरेको अवस्था छ। हामी आफैले सदस्य बनाउने र कम्प्युटरको हार्डडाईभबाट संस्था चलाउन खोज्ने डरलाग्दो अवस्था आएको छ । अब कसरी हामी सबै मिलेर सबैको साझा संस्था बनाउने भन्ने आज हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्न पर्ने समय आएको छ ।
अझै पनि धेरै ढिलो भएको छैन सबैले सोचौं र समाज र एनआरएन अमेरिकालाई गलत बाटोमा जानबाट जोगाउँ । बिभाजन तिर उन्मुख अमेरिकाको नेपाली डायस्पोरालाई एकजुट बनाऊ । हामीबिच एकता भएमा मात्र एनसीसी अमेरिकाको गर्विलो उबस्थिति आईसिसीमा हुनेछ । जसले गर्दा अमेरिकाको नेपाली समाजका उपलब्धि आईसिसी र नेपाल सम्म पुग्नेछ ।
(लेखक पोखरेल, एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्षका उम्मेदवार तथा वर्तमान कार्यसमितिका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ I )